PSJTV | के हो च्यानल सुरुङ?
के हो च्यानल सुरुङ?
शुक्रबार, १२ असोज २०७५ पिएसजे टिभी
एजेन्सी: च्यानल सुरुङ ५० किलोमिटर लामो रेलवे सुरुङ हो जसले फ्रान्स र बेलायतलाई जोड्ने गर्छ। अचम्म त के छभने यो सुरुङ अरु रेलवे सुरुङजस्तो नभएर समुन्द्रको फेदमा बनाइएको सुरुङ हो। यो सुरुङले दक्षिणी बेलायतको फोकस्टोन र उत्तरी फ्रान्सको कोकेल्ललाई जोड्नेगर्छ। यो सुरुङको ३८ किलोमिटर भाग ईङलीस नहरको पानीमुनी पर्नेगर्छ जुन लम्बाई समुन्द्रमुनी भएका सुरुङहरुमध्ये सबैभन्दा लामो हो। समुन्द्रसतहदेखि ११५ मिटरको गहिराईसम्ममा बनेको यो सुरुङ विश्वकै सबैभन्दा लामो सुरुङभने होइन। यो सुरुङमा चल्ने रेलका लागि अधिकतम गति १६० किमी प्रतिघण्टा निर्धारण गरिएको छ।
कोरोना भाइरस रोक्न मानवरहित ड्रोनबाट छरियो हावामा विषादी
छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी भएको निमोनिया उत्पन्न गराउने नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोप र जोखिम दिनदिनै बढ्दो छ। निमोनियालगायत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या निम्त्याउने भाइरसका कारण विश्वभर आतंक सिर्जना भएको। विश्वका दुई ...
संसदमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएसँगै सरकार त्यसलाई वैधता दिने तयारीमा लागेको छ। निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि अनुगमनसहित कानुन निर्माण गरेर गाँजा खेती गर्न दिन सरकार ...